Edgemesh: ROI ee Xawaaraha Ecommerce ee Adeeg ahaan | Martech Zone
Axad, Disembar 5, 2021 Axad, Disembar 5, 2021 Yacquub Loveless
Dunida tartanka e-commerce hal shay ayaa hubaal ah: Xawaaraha arrimaha. Study ka dib waxbarasho Waxay sii waddaa inay caddayso in goobta degdega ahi ay horseeddo korodhka heerarka beddelka, wadista qiyamka hubinta sare iyo waxay hagaajisaa qanacsanaanta macaamiisha. Laakin bixinta waayo-aragnimada shabakada degdega ah waa mid adag, waxayna u baahan tahay labadaba aqoonta qoto dheer ee naqshadeynta shabakada iyo kaabayaasha "cirifka" sare ee hubinaya in goobtaadu ay ugu dhowdahay macaamiishaada sida ugu macquulsan. Goobaha ganacsiga e-commerce, bixinta khibrad shaqo oo sare waxay si gaar ah u noqon kartaa mid aad u adag - oo leh madal badan iyo ku-tiirsanaanta codsiga qolo saddexaad oo u horseedaysa kakanaanta 11.
Ku tallaabsiga meesha bannaan waa wax yar oo la yaqaan, iyo xoogaa sir ah "Speed ​​as a Service" shirkad la yiraahdo Edgemesh. La aasaasay 2016, Edgemesh waxay bixisaa adeeg dardargelinta furaha kaas awood boqolaal tafaariiqle online ah kuwaas oo keena qaar ka mid ah khibradaha khadka ee ugu dhakhsaha badan ee shabakada. Kan gaarka ah ee Martech, waxaanu si qoto dheer u galnay waxa uu yahay Edgemesh, sida ay u shaqeyso iyo nooca waxqabadka korodhka macaamiisha ay ku arkaan goobta dardargelinta.
Waa maxay Edgemesh?
2021, Edgemesh ayaa siidaayay Adeegaha Edgemesh badeecada- waa madal dardargelinta cirifka adeega oo si hufan u bixiya goobaha 30-70% si dhakhso leh. Edgemesh Server, kaas oo ka shaqeeya guud ahaan labada shabakadood ee gudbinta nuxurka (Cloudflare iyo Fastly), waa madal waxqabad adeeg oo buuxa ah. Sida laga soo xigtay Edgemesh, Server-ku wuxuu qaataa degel kasta oo jira wuxuuna si aan kala go 'lahayn ugu guuraa cidhifka shabakadda isagoo ku daraya tiro hagaajin-wax-qabad ah. Wax badan oo arrintaas ku saabsan hoos.
Macmiilka Edgemesh waa browser, ama dhinaca macmiilka, xal dardargelinta. Macaamiishu waxay ku daraan macmiilka Edgemesh iyada oo loo marayo isku dhafka hal-guji ama iyagoo ku daraya hal xariiq oo kood ah goobtooda jirta. Plugins hadda waa diyaar WordPress, Soo iibso iyo Cloudflare. Habka rakibaadda waa mid toos ah waxayna qaadataa 5 daqiiqo.
Laga soo bilaabo halkaas, macmiilka Edgemesh wuxuu ku daraa laba sifo: la socodka dhabta ah ee isticmaalaha (si loo muujiyo waxqabadka goobta oo ku salaysan khibradaha dhabta ah ee macaamiisha) iyo kaydinta dhinaca macmiilka. Edgemesh wuxuu ku daraa kaydinta caqliga leh-dhinaca macmiilka iyada oo loo sii marayo qaab dhismeedka Shaqaalaha Adeegga-qaab asal ahaan loogu talagalay inuu u oggolaado shabakadaha inay ku shaqeeyaan offline. Tani waxay gacan ka geysaneysaa kordhinta qaddarka macluumaadka browserku ku hayn karo gudaha, iyadoo yaraynaysa codsiyada macmiilka ee serfarka laftiisa. Tani kaliya ayaa bixisa dardar-gelinta alaabta, laakiin sixirku wuxuu ka yimaadaa caqligiisa "pre-cache".
Iyada oo ku saleysan isdhexgalka isticmaalaha dhabta ah iyo cabirka waxqabadka, Edgemesh si caqli gal ah wuxuu u balaariyaa khasnad browserka si loo hubiyo in hanti badan horay loogu sii raray isticmaalayaasha-asal ahaan qiyaasida halka macmiilku aadi doono oo isku dayaya inuu sii jiro hal talaabo oo hore. Saamaynta waxqabadka waxaa lagu arki karaa bogga Edgemesh, iyada oo isticmaalayaasha "Dwargeliyay" ay yihiin kuwa ay u adeegeen cache-dhinaca macmiilku u adeegay 10% ama in ka badan ee bogga, iyo isticmaalayaasha "Aan Dardargelin" waa kuwa aan wax faa'iido ah ka helin. Cache-dhinaca macmiilka Edgemesh ayaa abuura. Iyada oo ku saleysan daraasadaha kiisaska macaamiisha dhabta ah, Macmiilka Edgemesh wuxuu caawiyaa kordhinta xawaaraha goobta 20-40%.
Waxtarka Dardargelinta Edgemesh
Waxqabadka Macmiilka Edgemesh
Waxqabadka Server Edgemesh
Macmiilku waxa kale oo uu qabtaa oo awooda xogta hawlqabadka heer qoto dheer. Xogtan waxaa laga soo ururiyay isticmaalayaasha dhabta ah ee boggaaga-waxa loo yaqaan xogta goobta. Waxaa jira tartameyaal badan oo goobtan ku jira, oo ay ku jiraan Relic Cusub, App Dynamics iyo Datadog—laakin bogga Edgemesh waxa uu ku wajahan yahay soo bandhigida xogta waxqabadka habab hore loo taxliilay oo aanu ka helnay dareen.
Tusaale ahaan, halbeegga waxqabadka kasta waxa uu leeyahay heerar la sii cayimay oo ah waxa loo tixgeliyo Degdega, Dhexdhexaadka iyo Qunyar socodka (midabka lagu calaamadeeyay fududaynta) - taas oo u oggolaanaysa qof kasta inuu si dhakhso ah u garto meelaha u baahan horumar. Halbeeg kasta oo waxqabad oo loo heli karo falanqaynta waa la qabtaa oo waxqabadka waxaa lagu burburin karaa aaladda, nidaamka hawlgalka, juqraafiga ama xitaa bog kasta. Intaa waxaa dheer, portal-ku wuxuu muujinayaa xogta waqtiga heerka API- taasoo kuu ogolaaneysa inaad aragto saameynta qoraallada qolo saddexaad iyo arjiyada ay ku leeyihiin waxqabadka goobtaada, mar labaad oo leh xiriirin degdeg ah si ay u muujiyaan abka gaabis ah oo keliya.
Adeegga Edgemesh waa madal dardargelinta adeeg buuxda. Si ka duwan Macmiilka Edgemesh, Xalka Server-ku wuxuu u baahan yahay hab-socod mid-ka-mid ah. Taasi waxay tidhi, geyntu si la mid ah way fududahay - iyadoo macaamiishu si fudud u cusbooneysiinayaan hal diiwaan oo DNS ah si ay ugu guuraan goobta Edgemesh.
Adeegga Edgemesh wuxuu ku fadhiyaa korka labada shabakadood ee gudbinta nuxurka - Cloudflare iyo Fastly. Adeegga Edgemesh, booqdayaashu waxay ku dhufteen nooca "cirifka adeega" ee degelkaaga, taasoo si weyn u yaraynaysa wakhtiga lagu bixinayo bogga. Intaa waxaa dheer, Edgemesh Server si toos ah oo daah-furan wuxuu u suurtageliyaa tiro ka mid ah hagaajinta waxqabadka heerka-shirkadda, oo ay ku jiraan:
Hagaajinta sawirada qaababka jiilka xiga oo ay ku jiraan AVIF
U cusboonaysiinta borotokoolka isku xirka HTTP/3 marka la heli karo
U guurista macluumaadka asal ahaan (Domain un-sharing)
Ku darida awaamiirta horudhaca garaadka iyo horudhaca bogga firfircoon
Ku darida macmiilka Edgemesh
Shirkadaha e-commerce, Edgemesh Server waxay u ogolaataa inay ku sii nagaadaan goobtooda jirta (tusaale Soo iibso) haddana kasbato faa'iidooyinka waxqabadka goob madax-la'aaneed oo caado u ah. Iyada oo xilliga fasaxa uu hadda naga dambeeya, Edgemesh wuxuu la wadaagay tusaalayaal waxqabad oo kasbaday macaamiishooda Edgemesh Server:
Natiijooyinka Adduunka dhabta ah
Edgemesh waxay haysataa tiro daraasado kiis ah oo laga heli karo shabakadooda, laakiin waxay bixiyeen tusaalooyin faahfaahsan oo ku saabsan faa'iidooyinka waxqabadka iyo natiijooyinka ka soo baxa heerka beddelka. Iyada oo ku saleysan xogta la keenay waxaan xaqiijin karnaa - arrimaha xawaaraha!
Codso Edgemesh Demo
Jake Loveless waxa uu lahaa labaatan sano oo shaqo ah samaynta tignoolajiyada si dhakhso leh. Laga soo bilaabo nidaamyada ganacsi ee daahitaanka hooseeya ee Wall Street ilaa goobo waaweyn oo shabakadeed oo loogu talagalay Wasaaradda Difaaca ilaa shabakadaha microwave ee shirkadaha isgaarsiinta - Jake wuxuu ka caawiyay u-jeedinta software-ka xadka xawaaraha cusub. Maanta, Jake ayaa orda Edgemesh, Shirkadda dardargelinta shabakada caalamiga ah ee uu la aasaasay laba-la-hawlgalayaasheeda 2016. Edgemesh waxay ka caawisaa shirkadaha eCommerce ee warshado badan iyo goobo badan oo bixiya 20-50% bogag degdeg ah isticmaalayaasha adduunka oo dhan.
Dib-u-celinta: Sida Si Toos ah Loogu Sameeyo Dukaankaaga Shopify ama Shopify Plus Store